ဥပဒေအသက်မရှိသော ၁၉၈၂ – ခုမြန်မာနိုင်ငံ သားဥပဒေဖြင့် ရိုဟင်ဂျာ ကိစ္စဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ။ | ဧရာဝတီ Irra Wadi
← ရိုဟင်ဂျာဆိုင်ရာသမိုင်း အထောက်အထား စာတမ်း : – In Respect Of The Fact The Local Islam’s Inhabitants Within Rakhine State Are Native Race And Citizen Of Myanmar Under Law : in English and Burmese version …
Bangladesh Ambasador →
Posted on December 30, 2012	by irrawadi
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးတာဝန်ယူထားသည့် အတွက်ဒေါ်စုကိုသီးခြားတာဝန်ပေးသည်ဖြစ်စေ၊ မပေးသည်ဖြစ်စေ ဒေါ်စု ကြားဝင်ပြောကြားဖြေရှင်း ပေးဖို့ တာဝန် ရှိသည်။ရခိုင်ပြည်တွင် ရိုဟင်ဂျာမွတ်ဆလင်များကို တိရစ္ဆာန်လို သဘောထားဆက်ဆံနေသည်မှာ လု့အခွင့်အရေးချိုးဖေါက်ခံရဆုံးဖြစ်သည်။ဤအချက်နှင့်ပါတ်သက်၍ ကုလသမဂ္ဂ (၁၉၃) နိုင်င်ငံ ၊မြန်မာနိုင်ငံ အပါ အ၀င် အတည်ပြုလက်ခံထားသည့် အတွက်ငြင်း ဖွယ်ရာမရှိပါ။
၂၀၁၂ ခု ဒီဇင်္ဘဘာ (၁၀)ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့၊ အင်းလျားလိတ် ဟိုတယ်၌ ယနေ့ကျင်းပသော အပြည် ပြည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် အခမ်း အနားတွင် မြန်မာ့ဒီမို ကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောကြား ချက်မှာ –
လူ့အခွင့်အရေးကို လေးစားလိုက်နာတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကို ထူထောင် ချင်တယ်ဆိုရင် တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးဆက်ဆံနည်းကို ကျမတို့အားလုံး လေ့လာသင်ယူရမှာ ဖြစ်ကြောင်း၊ စစ်မှန်တဲ့ ဆွေးနွေးဆက် ဆံခြင်းဆိုတာ တစ်ဖက်သက်သဘော မဟုတ်ပဲ ၂ ဖက်အပြန်အလှန် ဆက်ဆံ ရေးဖြစ် ကြောင်း၊ လူ့အခွင့်အရေးကို ဖော်ဆောင်ရာမှာ ပညာရေးဟာ အထူးအ ရေးကြီး ကြောင်း၊ ပညာရေးမြှင့်တင်ခြင်းအားဖြင့် လူ့အခွင့်အရေးကိုလဲ တပါ တည်း မြှင့်တင် သွား နိုင်ကြောင်း – စသည့် အချက် များကိုထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်ကိုသတိပြုမိပါသည်။
ထို့ကြောင့်လူ့အခွင်အရေးကိုဖြေရှင်းရာတွင်လောကပါလတရားကိုလည်းလက်ကိုင်ထားရမလို၊တရား ဥပဒေ ကိုလည်း စံပေတံအဖြစ်အသုံးပြုရန် လိုပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသား ဥပဒေသည် ဥပဒေ ဘောင်တွင် အကျုံ့မ ၀င်သော ဥပဒေဖြစ်သည်။ဥပဒေအသက်မရှိ၊ဘာသာခြားများကို တစ်ဖက်သတ်ကိုဖိနှိပ်ရန် ရည်ရွယ် ထား သော ဥပဒေ ဖြစ်၍ လူ့အခွင့်ရေးကိုချိုးဖေါက်မှုကို အကာအကွယ်ပေးနိုင်မည် မဟုတ်ပေ။
မြန်မာနိုင်မာနိုင်ငံတွင် ဒိုင်းနက်လူမျိုးသည် တိုင်းရင်းသား(၁၃၅) မျိုးထဲတွင်ပါဝင်သည်။သို့သော် ဒိုင်းနက် လူမျိုး သည် ၁၉၇၂ ခုနှစ်က ပြည်ထဲရေးရုံးမှ ထုတ်ဝေသော တိုင်းရင်းသား (၁၄၄)မျိုးနှင့်နိုင်ငံခြားသား (၂၆) မျိုး ကျေညာ ခဲ့စဉ်က ဒိုင်းနက်သည် နိုင်ငံခြားသားစာရင်းတွင်ပါဝင်သည်။တဖန် ဒိုင်းနက် ဘင်္ဂလားဒေရ်ှနိုင်ငံ တွင် တိုင်းရင်းသား စာရင်းဝင်ဖြစ်သည်။အလားတူ ဘရူဝါ(ခ) မရမာကြီး လည်းဘင်္ဂလားဒေရ်ှတွင်း တိုင်း ရင်း သား စာရင်းဖြစ် သည်။ယနေ့မြန်မာနိုင်ငံတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဘင်္ဂလားဒေရှ် ဆိုင် ရာသံအမတ်ကြီးသည်ဒိုင်းနက် လူမျိုးဖြစ်သည်။ အဖြစ်တာဝန် ထမ်းဆောင်သူ သည်။
သို့သော် ရိုဟင်ဂျာဆိုသော လူမျိုးသည် ဘင်္ဂလားဒေရ်ှဖွား မဟုတ်။ရခိုင်ပြည်ဖွား တိုင်းရင်းသား၊ နိုင်ငံသားဖြစ်သည်။သမိုင်းအထောက်အထားပေါင်းများစွာကို လည်းလွှတ်တော်သို့တင်ပြ ထားပြီးဖြစ် သည်။ အစ္စလာမ်ဘာသာအပေါ် ခွဲခြားဆက်ဆံပြီး ဘဂ်ါလီစာရင်းအဖြစ်အတင်းရေးသွင်းရန်ကြိုးပမ်းသည်မှာ လူမျိုး တစ်မျိုးဖျောက်ပစ်ရန်အတင်းအဓမ္မကြိုးစားခြင်းဖြစ်သည်။
တိုင်းရင်းသား (၁၃၅) မျိုးထဲတွင် ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးမရှိဟု ဘုရားစာကဲ့သို့ တတွတ်တွတ်ရေရွတ်နေသော်လည်း ထိုနိုင်ငံသား ဥပဒေသည် ဘောင်ဝင်သော ဥပဒေမဟုတ် သည်ကို သတိပြုရန်လိုပါသည်။မြန်မာနိုင်ငံသား ဥပဒေသည် ဘုရားဟောကျမ်းထဲက စာမဟုတ်။သိကြားမင်းချပေးသော ဥပဒေလည်းမဟုတ်။ အာဏာရှင် အစိုးရက ဘာသာခြားများကိုဖိနှိပ်ရန်တမင်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနှင့် ရေးဆွဲထားသော ဥပဒေဖြစ်သည်။ ယခင်က တိုင်းရင်းသား လူမျိုး (၁၄၄) မျိုး၊ (၁၄၃) မျိုး ၊(၂၉)မျိုး၊ မှ ၁၃၅) မျိုး ဖြစ်လာခဲ့သဖြင့်အတိုး အလျော့ပြုလုပ် နိုင်ခဲ့သလို ရိုဟင်ဂျာအတွက်လည်း လူမျိုး (၁) မျိုးယခုအခါ ဖြည့်စွက်ပေါင်းထည့်အချိန်အခါ ရောက်ရှိနေ ပါသည်။ဘင်္ဂါလီ ဆိုသော အမည်နာမ သည် မည်သည့်ကျမ်းတွင်မရှိကြောင်း၊စစ်အစိုးရက သာ အဓမ္မ သတ် မှတ်ခေါ်ဝေါ်သည့် နာမည်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း ဘင်္ဂါလီမဟုတ်ဘဲ ဘင်္ဂါလီ အမည်နာမသတ်မှတ်ခြင်းကို ခါးခါး သီးသီး ငြင်းဆိုရခြင်းဖြစ် သည်။
အချုပ်ပြောရလျှင် ဒိုင်းနက် ၊ဘရူဝါ ကိုမည်ကဲ့သို့တိုင်းရင်းသားအဖြစ် (၁၃၅) မျိုးထဲတွင် ထည့်သွင်း သကဲ့ သို့ ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးများကိုလည်း ထိုကဲ့သို့ထည့် သွင်းရန် ဖြစ်ကြောင်း အကြံပြုပါသည်။
၁၉၈၂ ခု မြန်မာနိုင်ငံသား ဥပဒေ ကို လေ့လာကြည့်လျှင်
ဥပဒေ တစ်ခုရေးဆွဲလျှင် ၎င်း ဥပဒေသည် မည်နေ့ရက်မှစ၍ အာဏာတည်စေကြောင်း ပြဌာန်းရန်လိုသည်။ သို့သော် မြန်မာနိုင်ငံ သားဥပဒေ ကို ရေးဆွဲ ခဲ့သော်လည်း၎င်းဥပဒေကို မည်သည့်နေ့ရက်အချိန်မှ စ၍အာဏာ တည်စေကြောင်း အတည်ပြုပြဌာန်းထားခြင်းမရှိ ခဲ့ပါ။နောက် နှစ်ပေါင်း (၈) နှစ် ကျော် ကြာပြီး နောက် စစ်အစိုးရ လက်ထက်က စတင်အသုံးပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။သို့သော် ၎င်း ဥပဒေသည် အာဏာ တည် ကြောင်း အတည်ပြုပြ ဌာန်းခြင်းမရှိ၍ Dead Law ဖြစ်နေသည်။ ၎င်း Dead Law ကို စစ်အစိုးရ အလိုကျ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်များ ကို နှိပ်ကွပ်ရေးအတွက် အသုံးချခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင်း ၁၉၈၂ ခု နိုင်ငံသား ဥပဒေ သည် ဥပဒေအသက် မရှိ Dead Law ဖြစ်နေခြင်း ၊နိုင်ငံတကာ ဥပဒေစံချိန်စံညွန်းနှင့် မကိုက်ညီခြင်း၊ ၁၉၇၄ဖွဲ့စည်းပုံ ဥပဒေ ၊၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ ဥပဒေနှင့်ဆန့် ကျင်နေခြင်းကြောင်း ၎င်း ဥပဒေသည် ဗုဒ္ဒဘာသာမြန်မာလူမျိုးအကျိုးပြုသည်ဟု ဆိုပြီး ဥပဒေကိုပြင်ဆင်ပြဌာန်းခြင်းမပြုရန် လွှတ်တော်တွင်မှတ် တမ်းတင်ထား သည် မှာ ဥပဒေနှင့်ဆန့်ကျင် ၍ ပြင်ဆင်ရန် လိုပါသည်။ဤ အချက်ကို ထပ်မံစီစစ်ကြည့်လျှင်-
လူမျိုး (Ethnic Nationality) နှင့် နိုင်ငံသား (Citizen) တို့၏ ဆက်စပ်မှု နှင့် ကွားခြားမှု သည် သမိုင်း ကြောင်း နောက်ခံမှ စတင် သည်။
၁၉၄၇ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ (၁၁) ၌ သဘာဝ အလျှောက် နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း နှင့် နိုင်ငံသားပြုခံရ၍ နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း နှစ်ရပ်လုံးကို ပြဌာန်း ထားသည်။
သဘာဝ အလျှောက် နိုင်ငံ သားဖြစ်ခြင်း ပုဒ်မ (၁၁) (က) မြန်မာနိုင်ငံ တိုင်းရင်းသား တမျိုးမျိုး၏ မိဘနှစ်ပါး မှ မွေးဖွားသူတိုင်းသည် လည်းကောင်း၊နိုင်ငံသားပြုခံရ၍ နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း
ပုဒ်မ (၁၁) (ဃ) —— ၁၉၄၂ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ (၁) ရက်နေ့မှ အထက် အခြားမဲ့သော ဆယ်နှစ်အတွင်း ရှစ်နှစ် အောက် မယုတ်သော ကာလ အဖို့ ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတွင် ပါဝင်လတ္တံ့သော အာဏာပိုင်နက် အတွင်း၌ နေထိုင်ခဲ့ ဘူးပြီးဖြစ်လျှင် ပြည်ထောင်စု နိုင်ငံအတွင်းတွင် ထာဝစဉ်နေထိုင်ရန် ကြံရွယ်ခဲ့သည်ဖြစ်၍၊ ထို့အပြင် တရား ဥပဒေဖြင့်သတ်မှတ်သော အချိန်အတွင်းတွင် ထိုသို့သတ်မှတ်သော နည်းလမ်းနှင့် အညီ ပြည်ထောင်စု နိုင်ငံသား အဖြစ်ရွေးချယ်ခြင်းကို ထုတ် ဖေါ် သူတိုင်း သည် လည်းကောင်း၊
၁၉၄၇ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ အထက်ပါ ပြဌာန်းချက်ကို အခြေခံကာ သဘာဝ အလျှောက် နိုင်ငံ သားဖြစ် ခြင်း နှင့် စပ်လျှဉ်း၍ ၁၉၄၈ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု နိုင်ငံ သားဖြစ်မှု အက်ဥပဒေတွင် အောက်ပါ အတိုင်း ပြဌာန်း ထားသည်။
ပုဒ်မ (၃)။ ။(၁) အခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၁၁ အလို့ငှာ “မြန်မာနိုင်ငံ တိုင်းရင်းသား တမျိုးမျိုး” ဆိုသည် မှာ ကချင်၊ ကရင်၊ ကရင်နီ၊ ချင်း၊ မြန်မာ၊ မွန်၊ ရခိုင်၊ သို့တည်း မဟုတ် ရှမ်းလူမျိုးကိုလည်းကောင်း၊ ၁၈၂၃ ခုနှစ် (မြန်မာ သက္ကရာဇ် ၁၁၈၅ ခုနှစ်) မတိုင်မီ ကာလမှစ၍ ပြည်ထောင်စုတွင်ပါဝင်သော နယ်မြေတခုခု၌ မိမိတို့၏ပင်ရင်းတိုင်းပြည် အဖြစ်ဖြင့် အခြေစိုက်နေထိုင်ခဲ့သော မျိုးနွယ်စုများကို လည်းကောင်း ဆိုလိုသည်။
၁၉၄၇ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ အထက်ပါ ပြဌာန်းချက်ကို အခြေခံကာ နိုင်ငံသားပြုခံရ၍ နိုင်ငံသား ဖြစ်ခြင်း နှင့် စပ်လျှဉ်း၍ ၁၉၄၈ ခုနှစ် ပြည်ထောင် စု မြန်မာနိုင်ငံသားအဖြစ် ရွေးချယ်ရေး အက်ဥပဒေ တွင် အောက်ပါ အတိုင်း ပြဌာန်းထား သည်။
ပုဒ်မ (၃)(ခ)။ ။ ၁၉၄၂ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ ၁ ရက်နေ့မှ အထက် အခြားမဲ့သော ကာလအတွင်း ဆယ်နှစ် အတွင်း ရှစ်နှစ်အောက် မယုတ်သော ကာလ အဖို့ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံ၏ အာဏာပိုင်နက် အတွင်း၌ နေထိုင်ခဲ့ဘူးသူ ဖြစ်ခြင်း။
ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်း ခေါင်းဆောင်သည့် စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက် ၁၉၇၄ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွင် ပုဒ်မ ၁၄၆ အရ နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း၊ နိုင်ငံသားပြုခြင်း၊ နိုင်ငံသားအဖြစ်မှ ရုပ်သိမ်းခြင်းတို့ နှင့် စပ်လျှဉ်း ၍ ဥပဒေ အတိုင်း ဖြစ်စေရ မည်ဟု ပြဌာန်းခဲ့သည်။ နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ကို ဖွဲ့စည်းပုံတွင် ပြဌာန်းကာကွယ် စောင့်ရှောက် သည့် အဆင့်မှ လျှောကျ သွားပြီး အာဏာပိုင်တို့အလိုကျ ဥပဒေပြဌာန်းကျင့်သုံးသည့် အဆင့်သို့ ရောက် သွားခဲ့သည်။
ထို့နောက် ၁၉၈၂ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေ ကို ထုတ်ပြန်ကာ လွတ်လပ်ရေးရပြီး ခေတ်မှစ၍ တောက် လျှောက်ကျင့်သုံးလာခဲ့သော ၁၉၄၈ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု နိုင်ငံသားဖြစ်မှု အက်ဥပဒေ ကိုလည်း ကောင်း၊ ၁၉၄၈ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံသားအဖြစ် ရွေးချယ်ရေး အက်ဥပဒေ ကိုလည်းကောင်း ရုပ် သိမ်း လိုက်သည်။
(၂) မူလ ဥပဒေဟောင်းတွင် နိုင်ငံခြားသားတဦးဦးအား နိုင်ငံသားပြုမှု လက်မှတ်ကို လျှောက်ခွင့်ပေးထားပြီး သတ်မှတ် ချက် တရပ်အနေဖြင့် တိုင်းရင်း သားဘာ သာစကား တမျိုးမျိုးကို ပြောဆိုတတ်၇မည်ဟု ပါရှိခဲ့သည်။ ၁၉၈၂ ခုနှစ် မြန်မာ နိုင်ငံသားဥပဒေ တွင်မူ ၁၉၄၈ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ (၄)ရက်နေ့မတိုင်မီ နိုင်ငံ အတွင်း ရောက်ရှိနေထိုင်သူနှင့် ၄င်းတို့မှ မွေး ဖွားသည့်သားသမီးများကိုသာ လျှောက်ခွင့်ပေးသည်။
ဖျက်သိမ်းခဲ့သည့် ဥပဒေဟောင်းနှစ်ခုမှာကဲ့သို့ မဟုတ်တော့ဘဲ ၁၉၈၂ ခုနှစ် မြန်မာ နိုင်ငံသားဥပဒေသည် ရှုတ်ထွေးပြီး သာမန်လူထုများ မျက်စိ လည်အောင် ပြဌာန်းထားသည်။ ဤအချက်မှာ ဥပဒေကို လက်တွေ့ ဖေါ်ဆောင်သော အခါ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ထမ်းများနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင် များ၏ လက်တွင်း သို့ ကျရောက် သည်။
လွတ်လပ်ရေးရစကရှိထားပြီးဖြစ်သော ရှင်းလင်းသည့် ဥပဒေနှစ်ခုကို ဖျက်သိမ်းကာ ရှုတ်ထွေးပြီး မပြည့်စုံသော ဥပဒေ ကို ပြဌာန်းခဲ့ခြင်း၊
သုံးသည့် အခြေခံတွင် အာဏာကို အုပ်ချုပ်ရေးကိုင်တွယ် သူ စစ် အာဏာပိုင်များကသာ ၇လိုခြင်း၊ ရှင်းလင်းသော လည်ပတ်မှုဖြစ်စဉ် မရှိခြင်း၊ တာဝန်ခံမှု မရှိခြင်း၊ ကြီးကြပ်မှု မရှိခြင်း၊ ပြည်သူလူထုတွင် မေးမြန်းပိုင်ခွင့်နှင့် သတင်းအချက်ရယူပိုင်ခွင့်ကို ဥပဒေနှင့် အညီကျင့်သုံးခွင့် မရခြင်း၊ ဥပဒေပြသနာ သာမက ဥပဒေစိုး မိုးရေးပြသနာပါတည်ရှိခြင်း အစရှိသည် တို့ ကြောင့်ဖြစ်သည်။
၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၄၅ ကို ကြည့်ပါ။
ပုဒ်မ ၃၄၅။ ။ အောက်ဖေါ်ပြပါ အရည်အချင်းတရပ်ရပ်နှင့် ပြည့်စုံသူများသည် နိုင်ငံသားများ ဖြစ် ကြ သည်။
(ခ) ဤဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ အတည်ပြု ပြဌာန်းသည့်နေ့တွင် ဥပဒေအရ နိုင်ငံသား ဖြစ်ပြီးသူ။
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံပါ အထက်ပါ ပြဌာန်းချက်အရ ၁၉၄၇ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွင်ပါရှိသော နိုင်ငံသားပြုခံရ၍ နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း ဟူသည့် အနှစ်သာရသည် ပျက်သုဉ်းသွားခဲ့ပြီဖြစ်သည်။
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံကိုပါ တကယ်တန်း အတည်ပြုကျင့်သုံးသွားမည်ဆိုလျှင် တိုင်းရင်းသား မိဘနှစ်ပါးမှ မွေးဖွားသူ မဟုတ်သူများသည် မည် သည့်အခါတွင်မျှ နိုင်ငံသား မဖြစ်နိုင်တော့။ နိုင်ငံသားပြုခံရ၍ နိုင်ငံ သားဖြစ်ခြင်း အခြေခံသည် ၁၉၄၇ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေက ချမှတ်ခဲ့ပြီး ကောင်းမွန်သောမူဖြစ်သည်။ တိုးတက် ဖွံ့ဖြိုးသော ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကြီးများတွင်လည်း ဤ မူကို လက်ခံ ကျင့်သုံး လျှက် ရှိကြ သည်။ ယခုဤမူကို ဖျက်လိုက်ပြီ။ သို့ဖြစ်၍ နိုင်ငံသားဖြစ်နိုင်ရန် လမ်းကြောင်း တကြောင်းသာ ရှိတော့သည်။ မိမိတို့သည် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးဖြစ်ပါသည်ဟူသည်ကို လိုအပ်သည်ထက် ပိုမို၍ တင် သွင်း သော လှုပ်ရှားမှုများပေါ်လာမည်။ ထိုသူတို့ အား မူလကပင် အကြောင်းအမျိုးမျိုးဖြင့် အာဃာတ ရှိထားသော လူမျိုး ကလည်း တန်ပြန်ဆန့်ကျင်သော လှုပ်ရှားမှုများ ပေါ်လာမည်။ သို့ဖြစ်၍ လူမျိုးရေး ပဋိပက္ခများ တောက် လျှောက် ဆက်ရှိနေမည်။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအောက်တွင် လူမျိုးရေးပဋိပက္ခများ ပိုမိုကြီးထွားလာရန်သာ ရှိသည်။
အရေးကြီးသော နောက်ထပ်ဥပဒေပြသနာတခုမှာ မိမိနိုင်ငံအနေဖြင့် အတည်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုး ထားသော နိုင်ငံတကာ သဘောတူစာချုပ်ကို လိုက်နာရ မည့်တာဝန်ဖြစ်သည်။
ဤသည်မှာ “လူ့ အခွင့်အရေး ကတော့ လိုက်နာနိုင်ရင်ကောင်းပါတယ်” ဟူ၍ ပြောရုံမျှဖြင့် မလုံလောက်တော့။ “လူ့အခွင့်အရေးကို တဘက် က စဉ်းစားပေါ့။ ကိုယ့်နိုင် ငံရဲ့ ထူးခြားတဲ့အခြေအနေလည်း ကြည့်ရမယ်” ဟူ၍ ဆင်ခြေပေးပြီး မိမိတိုင်းပြည်က လက်မှတ် ရေးထိုင်း အတည်ပြုထားသော နိုင်ငံတကာ သဘောတူစာချုပ်ကို မလိုက်နာ၍မရ။ မြန်မာနိုင်ငံ အနေဖြင့် နိုင်ငံတကာ သဘော တူစာချုပ်နှစ်ခုကိုသာ လက်မှတ် ရေးထိုး အတည်ပြုထားသည်။ တခုမှာ ကုလ သမဂ္ဂ ကလေးအခွင့်အရေး ဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာ သဘောတူစာချုပ် ဖြစ်သည်။
နောက်တခုမှာ အမျိုးသမီး များအား ခွဲခြားဆက်ဆန်မှုပပျောက်ရေး ဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာ သဘောတူစာချုပ်ဖြစ်သည်။ ဤနှစ်ခုမျှသာ ရှိသော နိုင်ငံတကာ သဘော တူစာချုပ်တို့ ကို လိုက်နာဘို့ မဆောင်ရွက်လျှင် မြန်မာနိုင်ငံသည် နိုင်ငံတကာ အလယ်တွင် မည်ကဲ့သို့ မျက်နှာမော် မည်နည်း။ စစ်အစိုးရဖန်တည်း ထားသည့် လွှတ်တော်သည် ဤစာချုပ် များအား မည်ကဲ့သို့ လိုက်နာဖေါ်ဆောင်ဘို့ လိုအပ်ကြောင်း ဥပဒေကြောင်းအရ ဆွေးနွေးမှုများ ယခုအထိ မကြား ရ သေးပါ။
ဥပဒေစိုးမိုးရေးကို တတွတ်တွတ် ရွတ်နေသူများသည် အဘယ်ကြောင့် မသိခြင်ယောင်ဆောင်နေပါသနည်း။ စစ်မှန်သည့် ဥပဒေစိုးမိုးရေး အခြေခံမရှိလျှင် တိုင်းပြည် မည်သည့် အခါတွင်မျှ တကယ်တန်း တည်ငြိမ်နိုင်မည် မဟုတ်သည်ကို အသိအမှတ်မပြုကြ၍လား။
ကလေးအခွင့်အရေး ဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာ သဘောတူစာချုပ်ကို လိုက်နာကြောင်း ပြသည့် အနေဖြင့် စစ်အစိုးရက ၁၉၉၃ ခုနှစ် ကလေးသူငယ် ဥပဒေကို ပြဌာန်းပြီး ပုဒ်မ ၃ (က) တွင်အောက်ပါ အတိုင်း တွေ့ရ သည်။
ပုဒ်မ ၃ (က) ကလေးသူငယ် အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ ကွန်ဗင်းရှင်းပါ ကလေးသူ ငယ်၏ အခွင့်အရေးများကို အကောင်အထည်ဖေါ် ဆောင်ရွက်ရန် — ဟူ၍ဖြစ်သည်။ ကလေးသူငယ် များ၏ အခွင့်အရေးများ အနက်တရပ်မှာ နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့် ဖြစ်သည်။ အများပြည်သူ နှင့် နိုင်ငံရေးအခွင့်အရေးဆိုင်ရာ နိုင်ငံ တကာ သဘောတူစာချုပ် ပုဒ်မ ၂၄(၃) တွင် ကလေးသူငယ်တိုင်းသည် နိုင်ငံသားအဖြစ် ရယူခွင့် ရှိရ မည် ဖြစ်ကြောင်း ပြဌာန်းထားသည်။
ကလေးအခွင့်အရေး ဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာ သဘောတူစာချုပ် အပုဒ် (ရ) (၂) တွင် ကလေးသူငယ် များ နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ရစေရန် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းပြည်များက ၄င်းတို့၏ အမျိုးသားဥပဒေများနှင့် အညီ ဖေါ်ဆောင် ပေး ရမည်ဟု အတိအလင်း ပြဌာန်းထားသည်။ ဤသည်ကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ကြောင်း ပြသသည့်အနေ မျိုးဖြင့် စစ်အစိုးရ ၏ ၁၉၉၃ ခုနှစ် ကလေးသူငယ်ဥပဒေတွင် အောက်ပါ အတိုင်း ပြဌာန်း ထားသည်။
ပုဒ်မ(၁၀) ကလေးသူငယ်တိုင်းသည် နိုင်ငံသား ဖြစ်မှုဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးကို တည်ဆဲဥပဒေပါ ပြဌာန်းချက် များ နှင့် အညီ ရရှိစေရမည်။
ကလေးသူငယ်ဥပဒေ အနေဖြင့် တဘက်မှ အခွင့်အရေး ပေးထားသလိုလို ပြဌာန်းထားသော်လည်း အခြားတဘက်မှ ပြန်ပိတ်ထားသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ တည်ဆဲ ဥပဒေပြဌာန်းချက်အောက်တွင် အကြုံးဝင် မှသာရရှိမည် ဟူ၍ဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်၍ ကလေးသူငယ်များသည် တည်ဆဲဖြစ်သော ၁၉၈၂ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံသား ဥပဒေအောက် တွင် နိုင်ငံသား ဖြစ်ခွင့် မရကြပါ။
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေပေါ်လာပြိး နောက် ပိုဆိုးသွားပါသည်။ သို့ ဖြစ်၍ ကုလသမဂ္ဂ ကလေး အခွင့်အရေး ဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာ သဘော တူစာချုပ်ပါ ကလေး အခွင့်အရေးကို အပြည့်အ၀ခံစားစေရန် စစ်အစိုးရ အဆက်ဆက်က ပြဌာန်းလာခဲ့ သော ၁၉၈၂ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေ၊ ၁၉၉၃ ကလေးသူငယ်ဥပဒေ နှင့် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ တို့ အား ပြင်ရန် မုချလိုအပ်ပါသည်။
၁၉၈၈ ခုနှစ်မှစ၍ ၂၀၁၂ ခုနှစ် အထိ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းသို့ ဝင်လာသူများ မည်သည့်နှစ်တွင် ဦးရေမည်မျှ ၀င်လာ သည်၊ မည်သည့်လမ်းကြောင်း မှ ၀င်လာသည်၊ မည်သည့်နည်းလမ်းဖြင့် ၀င်လာသည်၊ ထိုသူများ အနက် ယခု အချိန်၌် ဦးရေမည်မျှသည် နိုင်ငံသားများ ဖြစ်နေကြပြီ။ ဧည့်နိုင်ငံသားနှင့် နိုင်ငံသားပြုခွင့်ရသူ တို့၏ ဦးရေမှာ မည်မျှရှိသည်။ မည်သည့် အဆင့်မှ မရသူဦးရေမှာ မည်မျှဖြစ်ပြီး ဘာကြောင့် ဤသို့ မရရှိ ခြင်းဖြစ်သည်။ ကလေးဦးရေ စုစုပေါင်း မည်မျှ ရှိပြီး ကလေးအခွင့်အရေးအရနိုင်ငံ သားခံစားခွင့်ရပြီး သူပေါင်း မည်မျှရှိပြီ — အစရှိသဖြင့် တနိုင်ငံလုံးသိ ဖြေကြားရန် တာဝန်ရှိသည်။ သို့ မှသာ လူထု တရပ်လုံးလိုက်ပါ စဉ်းစားနိုင်ပြီး ၀ိုင်းဝန်း အဖြေရှာနိုင်ကြပါမည်။ အနာဟောင်းများကို ဖေါ်ထုတ်ကုစားခြင်း မပြုဘဲ အပေါ်ယံ ဆီမန်း လောက်မျှဖြင့် ကုသနေလျှင် မိမိတို့ နိုင်ငံသည် ကျမ္မာရေးကောင်းမွန်သည့် နိုင်ငံမည်သည့်အခါတွင်မျှ မဖြစ်နိုင် ပါ။ ယဉ်ကျေးမှုတရပ်သဘွယ်ဖြစ်မသွားမီ အတိတ်ကို ဖုံးကွယ်ထား သည့် လုပ်ဟန်အား ယခုကထဲက စတင် တိုက်ဖျက်ကြဘို့ လိုပါပြီ။
ရိုဟင်ဂျာ ရခိုင် အဓိကကရုဏ်းအား ငြိမ်းချမ်းစွာ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် အထောက်အကူပြု သည့် အနေဖြင့် အောက်ပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်သွား၇န် အကြံပြုပါသည်။
(ဂ) ဦးသိန်းစိန်ခေါင်းဆောင်သည့် အစိုးရကိုယ်တိုင်က ၀င်ရောက်ကျူးလွန်မှုကို နိုင်ငံတကာက ရက်စွဲ အတိအကျဖြင့် ထောက်ပြလာခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။ ဤဖြစ်စဉ်ကြီး တစုံလုံးကို အစမှအဆုံး သေချာစွာ ဖေါ် ထုတ်ပြီး နောက်ကွယ်မှ ကြိုးကိုင် ဆောင်ရွက်နေသူများ အပါအ၀င် ဦးဆောင်ကျူးလွန်ကြသည့် တရားခံအားလုံးကို လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ အသားအရောင်၊ မရွေးဘဲ ဥပဒေစိုးမိုးရေးအခြေခံဖြင့် ထိရောက်စွာ ဖေါ်ထုတ် အရေးယူနိုင် မှသာ နောင်သည်လိုအဖြစ်ဆိုးမျိုးမဖြစ်အောင် ကာကွယ်တားဆီးနိုင်ပါမည်။
(ဃ) ပြီးခဲ့သည့် နအဖ စစ်အစိုးရအောက်၌ ကျူးလွန်ဖြစ်ပွားခဲ့သော နိုင်ငံတကာအဆင့်ရှိသည့် ပြစ်မှုကြီးများ ကို ကုလ သမဂ္ဂ က ဦးဆောင်ပြီး စုံစမ်း စစ်ဆေးရေး ကော်မရှင်ဖွဲ့စည်းစစ်ဆေးစေရန် လှုပ်ရှား မှုကြီးမှာ ၂၀၁၀ ခုနှစ်အထိ အရှိန် ကောင်းစွာရခဲ့ပြီး အောင်မြင်တော့မည့်အနေအထားရောက်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ် အတွင်း စစ်အစိုးရက နိုင်ငံရေး အပြောင်းအလဲများ လုပ်ပေးသယောင်နှင့် လမ်းကြောင်း လွှဲနိုင်ခဲ့သဖြင့် ယင်းလှုပ် ရှားမှုမှာ ယာယီ တိမ်မြှုပ်သွားခဲ့သည်။ ယခုရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်း ပြစ်မှုကြီးများ ထပ်မံ ကျူးလွန် နေပြန်ပါပြီ။ နိုင်ငံတကာ လူ့ အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်း ၅၈ ဖွဲ့က စုပေါင်း၍ ဤမှုခင်း ကြီးအပေါ် နိုင်ငံတကာ အနေဖြင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး လုပ်ပေးရန် တောင်းဆိုလာပါပြီ။ ဤ လှုပ်ရှားမှုကို လူထုတရပ်လုံး ထောက် ခံသင့်၊ ၀ိုင်းဝန်းတောင်းဆိုသင့်သည်ဟု မြင်ပါသည်။ နိုင်ငံတကာ အနေဖြင့် စုံစမ်းစစ်ဆေး ဖေါ်ထုတ် ခွင့်မရပါက နောင် အလားတူပြစ်မှုကြီးများ ထပ်မံကြုံတွေ့ ဦးမည်မှာ မလွဲပါ။
ဒေါ်စုဖြေပါ- အပိုင်း(၃)၊ရခိုင်လူမျိုးများ၏ စိုးရိမ်ပူပန် ကြောင့် ကြမှု များ ကို အသိအမှတ် ပြုရမည်”ဟု ခွဲခြားဆက်ဆံမှုကိုကန့်ကွက်ခြင်း …
ဗိုလ်သိန်းဌေး ခင်ဗျားက “ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းက အင်မတန်မှ အငြင်းပွားဖွယ်ရာ အသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ်။ (ဗိုလ်သိန်းဌေးဆိုတဲ့ လူ့ဗာလ ဖတ်ရန်)
News in Arakan, သမ္မတဦးသိန်းစိန် ရိုဟင်ဂျာများ ကိုတတိယနိုင်ငံပို့မည်ဟုပြော။…..
ယခင်ဒေါက်တာအေးကျော်မကွယ်လွန်မီ ပြုလုပ်ခဲ့သော အင်တာဗျူး။…
အောင်ဆန်းစုကြည်၊ မြန်မာပြည်က ရိုဟင်ဂျာများနဲ့ ယုံကြည်ချက်ရဲ့ စိန်ခေါ်မှု (ဘာသာပြန်)
၁၉၈၂ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေသည် – Hmuu Zaw
ရိုဟင်ဂျာဘယ်သူလဲအသေးစိတ် သိရှိလိုသူများအတွက်လင့်ကိုနှိပ်၍ ဖတ်ပါ …
မျက်ကန်းမျိုးချစ်များဟု ဒု-ဗိုလ်ချုပ်ကြီး လှမင်းက ရခိုင်များအား ရည်ညွှန်း ပြော
ခိုးဝင်လာသောဘင်္ဂါလီများရှိ /မရှိကိုစစ်ဆေးရာတွင် ထွက်ဆိုချက်များအပေါ်မှတ်တမ်းတင်ရာ၌ဘင်္ဂလီ လူမျိုးဟု ရေးသားထားသဖြင့်လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း မရှိဘဲ ကန့်ကွက်ခဲ့ကြကြောင်းသိရှိရ ….
ဘင်္ဂါလီများကိုပါ သန်းခေါင်စာရင်း ထည့်ကောက်သွားမည်ဟု ဦးခင်ရီ သံချောင်းမှန်မှန်ခေါက် …
အယောင်ဆောင်ရခိုင်တိုင်းရင်းသားကြောင့် ရခိုင်ပြည်သူလူထု စိတ်ဆင်းရဲ ဒုက္ခဖြစ်နေရကြောင်း …
ရိုဟင်ဂျာမွတ်ဆလင်များသည်နိုင်ငံသားဖြစ်ကြောင်းလွှတ်တော်အသီးသီးသို့ကော်မရှင်ဖွဲ့၍ စစ်ဆေးရန်တင်ပြထားသည့်စာတမ်း …….
လူနည်းစုမွတ်ဆလင်အရေးမြန်မာသမ္မတ၏ ကတိစကားကို ကုလသမ္မဂကြိုဆို
Historical Document of Rohingya ၊ (ရိုဟင်ဂျာသမိုင်းအထောက်အထားများ)
အာရိယန်လူမျိုးစုမှ ဆင်းသက်လာသူ လူမျိုးစုစစ်စစ် ရခိုင်လား ရိုဟင်ဂျာလား
Very Important ရခိုင်ပြည်ရှိမွတ်ဆလင်များသည်သဘာဝအလျှောက် တိုင်းရင်းသား၊နိုင်ငံသားဖြစ်ကြောင်း၊ပြည် ထောင်စု လွှတ်တော်သို့ တင်ပြသည့်စာတမ်း …
ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေအစိုးရကို နောက်မှ ကြိုးကိုင်ထား သော အဖွဲ့အစည်းရှိသည်ဟု ဗိုလ်ချုပ်မောင်ဦး ပြော …
သမိုင်းကို လိမ်ချင်သူများ နောက်ကြောင်းပြန် သတိရဖို့ …